Doorashooyinkii Dhacay iyo Xisbiga SD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Adam Ihse/Scanpix.
Doorashooyinkii Dhacay iyo Xisbiga SD
Uppdaterat måndag 16 maj 2011 kl 17.05
Publicerat måndag 16 maj 2011 kl 16.01
Xisbi ka mid ah xisbiyada ay guusha ballaarani ku raacday doorashadii ka dhacday carriga Västra Götaland ayaa ah xisbiga marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano SD.
Xisbigaasina oo ku guuleeystay tiro dheer 1,4 boqolkii, gaarayna 5,8 marka loo barbar-dhigo doorashadii middaan ka horreeysay ee 2010. Sidoo kale codadkii uu xisbiga SD saamiga u yeeshay doorashadii ka dhacday Örebro ayaa kor u kacday inkastoo aaney codadkaasi gaarsiisneyn sida gobolka Västra Götaland.
Anders Lindberg, ahna suxufi ka howl-gala wargeeyska Aftonbladet ayaa qaba in natiijada doorashadani saameeyn ku yeelan doonto siyaasadda guud ee dalka, middaasina ku xiran tahay sida ey hadba xisbiyada kale middaa u wajahaan iyo in kale.
- Waa doorasho tilmaameeysa jiho, iyadoona haddii ay sidaa xaaladdu ku sii socoto suurtagelineeysa in xisbiga SD awood intaa ka ballaaran ku yeesho doorashada foodda innagu soo heysa 2014-ka. Waana xaqiiq aan dalka u wanaagsanayn.
Anders Lindberg ayaa ula jeeda in xisbiyada kale ee siyaasadda ku xidideeystey ey joojiyaan barxad-siinta xisbiga SD ee siyaasadda qaranka, eyna helaan waddo ey ku gaari karaan wada-shaqeeyn ballaaran ee garabyada siyaasadda dhexdooda. Anders Lindbereg ayaa laba siyaabood ku macneeyay horumarka uu xisbiga SD ka gaaray doorashooyinkii ku celiska ahaa.
- Midda koowaad in xisbigu helay xiise lagu daawan /dhageeysan karo kolkii uu xubnaha ku yeeshay mudaneyaasha baarlamanka. Halka xisbiyada kalena u suurtageliyeen sidii uu ku muuqan lahaa maadaama ey buuq iyo is qabqabsi-doodeed isugu xeeyteen la xiriira xisbiga SD. Midda labaad doorashadan ku celiska ayay sabab u ahayd khaladaad dhacay. Khaladaadka noocaasiyana waxey sii kordhiyaan quursiga siyaasiyiinta laga qabo, uuna codad dheeriya ku helayo xisbiga xag-jirka ee SD. Labadaa arrimmood ayaan u nisbeeyn lahaa guulaha xisbiga SD ka soo hoyay doorashooyinkii dhacay.
Macne sidee ah ayuu haddaba hor-u-markani u keeni karaa xisbiga SD?
- Waxaan oran lahaa waxey ku xiran tahay tallaabooyinka ey xisbiyada kale qaadaan. Xisbiga Mudaraatka ayaa shaleytaba sheegay suurtagal ey wada-shaqeeyn kula sameeyaan xisbiyada kale, haddii taasi dhacdana waxaa iman doona is-bedel ballaaran. Marka intaa laga yimaado waxey dhexda uga taagan yihiin miisaankii siyaasadda, waana mid ey horeba ugu joogeen, waxaanse anigu qabaa in xisbiyada Casaan-cagaarku hoggaankoodii wada-shaqeeyn ee carigaa sii wadaan.
Xisbiga Mudaraatka ayaa dabadeed dib ula noqday ballaan-qaadkii wada-shaqeeyn, waana mid caqabad ku noqon karta xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga, sida uu qoray wargeeyska liberaaliga ah ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano GP, maadaama buuna yiri wargeeysku ay siyaasiyadda lagu magacaabo Gert-Inge Andersson, waayo aragnimo iyo wada-shaqeeyn midna u lahayn dhex-marta garabyada kala duwan ee siyaasadda ku hardamaya.
Marka laga hadlayo xisbiga SD waxaa la oran karaa ama la qabaa iney dani ugu jirtay tirada yar ee codeeysay, sida caadiga ah taageereyaasha xisbiga SD ayaan u cadcadeeyn iney codeeyaan. Haddii xaqiiqdaasina dhab tahay, waxaa la oran karaa in xisbigaasi leeyahay taageero intaa ka badan.
Waxaa iyaduna meesha ku jirta in muddadii lagu jiray abaabulka doorashadaii ee gobolka Västra Götaland uu xisbiga SD dar dar goobtaa ka waday. Hogaamiyaha xisbiga Jimmie Åkesson ayaa marar badan booqday goobo gobolkaa ka tirsan, iyo dhaqaale badan ee doorashadaa la geliyay.
- Run ahaantii waxaa dhici karta in xisbigu uu kiciyay taageereyaashiisa, sidii ey doorashada codkooda uga dhiiban lahaayeen. Mana ahan mid la ilaawo in xisbiga SD uu helay codad 10 000 ka hooseeya marka loo barbar-dhigo doorashadii middan ka horeeysay ee 2010-kii. Hase yeeshee waa mid ey guul guushii hore ka ballaaran ku raacday, sida uu sheegay Anders Lindberg suxufi ka howl-gala wargeeyska maalinlaha ee Aftonbladet.